Biyaha caalamka oo laga walwalsan yahay in ay yaraadaan - BBC News Somali
Biyaha caalamka oo laga walwalsan yahay in ay yaraadaan
Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhallaanka ee UNICEF ayaa waxa ay ka digaysaa in ku dhawaad 600 oo milyan oo carruur ah oo ku kala nool daafaha caalamka ay ku noolaan doonaan deegaanno ay biyuhu aad gabaabsi ugu yihiin wixii loo gaaro sanadka 2040.
Tobannaan sano ayey khubaradu ka digayeen saameynta ay yeelan karto biyo-yarida.
Sanadkii 1985-kii ayaa Xoghayihii Guud ee Qaramada Midoobay ee xilligaasi, Boutros Boutros Ghali, waxaa laga hayaa hadal shaac baxay oo ahaa "Colaadda xigta ee Bariga Dhexe waxa ay noqon doontaa mid lagu dagaalamo biyaha ee ma noqon doonto mid siyaasadeed."
Haddaba warbixintan cusub oo cinwaan looga dhigay Oonka Mustaqbalka ayaa muujinaysa saadaasha musiibo gurikasta taaban doonto.
Warbixintu waxa ay eegaysaa halista ay carruurta biyo la'aanta ku reebayso iyo sida isbadelka cimilada ay u xoojin doonto halistaasi.
Sida lagu sheegay warbixintan, heerkulka diirran, cimilada sii xumaanaysa, heerka biyaha badda oo sare u kacaya, fatahaadaha sii kordhaya, abaaraha iyo barafka dhalaalaya ayaa waxa ay intuba saameyn ku yeelan doonaan in la helo biyo iyo nadaafad.
36 waddan oo ay ka mid yihiin Afqaanistaan iyo Yaman ayaa haatan waxa ay wajahayaan biyo la'aan aad u ba'an, arrintaa oo ka dhalatay baahida biyaha oo ka badan inta la heli karo.
Caalamka oo dhan haweenka iyo gabdhaha yaryar ayaa 200 oo milyan oo saacadood waxa ay maalintii ku qaadata in ay biyo ku soo dhaamiyaan.
Arrintan ayaa waxa ay ka dhigan tahay in gabdha badan aysan fursad u helin in ay wax bartaan.
Hay''adda UNICEF ayaa sheegaysa in dowladuhu ay u baahan yihiin in ay la yimaadaan qorshe, ka hor inta uusan isbadel ku dhicin helitaanka biyaha islamarkaana aan la dareemin saameynta isbadelka cimilada.
Hay'addu waxa ay leedahay ganacsiyadu waa in ay iska ilaaliyaan wasakheynta hawada halka bulshooyinkana ay tahay in ay la yimaadaan qaabab ay ku ballaarinayaan meelaha laga helo biyaha islamarkaana ay kordhiyaan awoodooda ay ku keydsan karaan biyaha.